PressReader - Ilanga: 2018-11-29 - Uvalo esikhulwini sikamasipala
Uvalo esikhulwini sikamasipala
Kutholwe unogada waso edindilizile
Ilanga - 2018-11-29 - Izindaba - PHUMLANI GAMA
KUQUBULE ingebhe kuSomlomo kaMasipala waseJozini ukutholakala kwesidumbu sikanogada wakhe, sidindilizile eduze komgwaqo, sinamanxeba okudutshulwa, kubekwe isibhamu phakathi kwemilenze yaso ngeSonto, ngakubo eMakhathini, eJozini.
UMnu Mandla Nxumalo (37) ubeqashwe wuMasipala waseJozini ukugada uNkk Lindiwe Gumbi.
Ngokusho kwabasondelene nomufi, akabikanga lutho oluyinkinga ebingaholela ekufeni kwakhe.
Kakuqondakali ukuthi udutshuliwe yini noma uzidubulile. Lesi sigameko sifake elikhulu itwetwe kuNkk Gumbi. NgoLwesibili uveze ukuthi usesaba ngisho nokuphumela ngaphandle ngoba akazi ukuthi ubulawelweni uMnu Nxumalo.
NgeSonto ube ngomunye wabahlangane nomndeni kamufi ukuyobhonga emswanini.
“Ngethuke kakhulu uma ngizwa ukuthi uMandla useshonile futhi kubonakala amanxeba okudutshulwa ekhanda. Kungithathe isikhashana ukukholwa ngoba bengiqeda ukumthuma edolobheni eJozini, okuthe uma esebuya wehla endleleni wangabe esabuya lapha ekhaya, kunalokho ngathola ucingo oluthi ubonakale ehleli etsheni.
“Omunye omdlule endleleni uveze ukuthi uthe uma ekhuluma naye, wathi kukhona abantu abalindile, esingazi-ke noma yibona yini abamenzakalisile.
“Ngizizwa ngingaphephile ngoba bengimethemba kakhulu futhi nguyena obeshayela imoto engihamba ngayo. Ngidlulisa amazwi okududuza emndenini naseqenjini lethu, i-IFP, ngoba bekuyisishabasheki sethu lesi, saziwa izindawo eziningi,” kusho uNkk Gumbi.
Omunye wabaholi be-IFP, ocele ukuba ligodlwe igama lakhe, uthe bazofaka ingcindezi ukuba kwenziwe uphenyo olunzulu ngoba kakuveli ukuthi ngesikhathi umufi ecela ukwehla endleleni, ngubani obeshayela imoto kamasipala (ehamba usomlomo).
Ilungu lomndeni wakwaNxumalo elingagunyaziwe ukukhuluma nabezindaba, liveze ukuthi umndeni usola ukuthi indodana yawo ihlaselwe yabulawa maqede kwabekwa isibhamu kuyona ukuze kuzoba sengathi izidubulile.
“Esikhathini esiningi siyaye sihlale naye umfowethu, kodwa akukho ake wakuveza ukuthi kumphethe kabi. Okubi wukuthi nguyena obephilisa umndeni wonke lapha ekhaya. Kusazohlangana umndeni siphume nosuku azofihlwa ngalo umfowethu,” kusho leli lungu.
Okhulumela amaphoyisa KwaZuluNatal, uCapt Nqobile Gwala, uthe amaphoyisa aseJozini aphenya icala lokufa komuntu.
Ngizizwa ngingaphephile ngoba bengimethemba kakhulu futhi nguye obengishayelela.
UMNU Mandla Nxumalo obengunogada kaSomlomo kaMasipala waseJozini isidumbu sakhe esitholwe sidindilizile.